Nagu saabsan - Yancheng Yi'an Dhismaha Birta Teknolojiyada Co., Ltd.
Yancheng Yi'an Building Steel Technology Co., Ltd. waa shirkad isku dhafan cilmi baarista iyo horumarka, nashqadeynta, soosaarka, rakibaadda iyo iibinta nidaamka xayndaabka qaabdhismeedka birta ah iyo nidaamka qolka nadiifka ah. Waxay leedahay koox farsamo oo leh aqoon hodan ah iyo khibrad maamul oo ku saabsan xayndaabka dhismaha birta iyo qolka nadiifka ah. Nidaamka xayndaabka qaabdhismeedka Birta waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhismayaasha rayidka ah ee dhaadheer, xarumaha bandhigyada, saadka bakhaarka, dhirta warshadaha, saldhigyada garoonka iyo garoomada. Nidaamyada qolka nadiifka ah waxaa loo isticmaalaa dhinacyo badan sida daawada, cuntada, kiimikooyinka maalinlaha ah, semiconductors elektaroonig ah, cilmi baarista aerospace iyo qolalka nadiifka ah ee tamarta cusub, qolalka howlgalka ee nadiifka ah, shaybaarada noolaha, iwm.
Shirkaddu waxay ka gudubtay aqoonsiga shirkadaha teknolojiyada sare ee Gobolka Jiangsu iyo shahaadada nidaamka tayada leh ee ISO9001, waxayna leedahay badeecooyin farsamo heer qaran ah iyo tiro shatiyada nooca korantada ah.
Si loo daboolo baahida suuqa ee tayada iyo u janjeedha adeegga, shirkaddu waxay samaysaa cilmi-baaris iyo hal-abuurnimo cilmi-baaris ah iyada oo la adeegsanayo hab macquul ah oo wax ku ool ah oo u hoggaansamaya falsafadda ganacsiga ee "dhisida meel nadiif ah oo leh sayniska iyo tiknoolajiyada, iyo awood-siinta mustaqbal aan caadi ahayn oo leh hal-abuurnimo", si loo qanciyo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha. Shirkaddu waxay si guul leh u soo saartay alaabooyinka u dhigma heerka yurub sida nidaamka tolida taagan, nidaamka saqafka laba jibaaran, birta nidaamka dusha derbiga isku dhafan, nidaamka saxanka sita salka, CZ purlin, saxan nadiif ah iyo qalab. Birta Yi'an waxay leedahay daraasiin xariiqyo wax soo saar buuxa oo otomaatig ah leh, saddex khadadka wax soo saarka guddiga bakhaarka oo nadiif ah iyo tiro ka mid ah qalabka xaashida biraha lagu xakameeyo. Awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee alaabada sida looxyada isku dhafan ee birta, looxyada bakhaarada nadiifka ah, aluminium-magnesium-manganese looxyada, taarikada zinc aluminium, taarikada birta midabka leh iyo saxanka taageerada dabaqa ayaa gaaraya 5 milyan oo mitir murabac ah.
"Daacadnimo, hal-abuurnimo iyo u-fiirsasho" waa qiyamkeena asaasiga ah. Waxaan ku dadaaleynaa inaan siino bulshada wax soo saar tayo sare leh oo leh qaabeyn wanaagsan, tikniyoolajiyad wax soo saar oo heer sare ah, kooxda maareynta iyo adeegga iibka kadib oo dhameystiran, waxaana ujeedkeedu yahay inaan noqono bixiye xalka guud ee nidaamka xiritaanka qaabdhismeedka birta iyo nidaamka nadiifka ah.
780mm nidaamka xakamaynta gudiga wareejinta
Qolka nadiifinta ee GMP
Cadaadiska hawada anteenada
Mashruuca guriga Prefab
Qalliinka injineernimada nadiifinta